यसकारण पित्तमा पत्थरी पर्न सक्छ ! « Himal Post | Online News Revolution
यसकारण पित्तमा पत्थरी पर्न सक्छ !
प्रकाशित मिति : २०७३, ३० चैत्र १८:५७
पित्तको पत्थरी धेरै हुने कारण पनि छन् । ज्यादा चिल्लो खाने मानिसलाई पत्थरीको समस्या देखिन सक्छ । वंशाणुगत र वातावरणको कारणले पनि पत्थरी हुनसक्छ । हामीले ज्यादा मात्रामा चिल्लो पदार्थ प्रयोग गर्‍यौं भने जीउमा चिल्लो बढ्छ । त्यस्ता मानिसलाई कोलेस्टेरोल स्टोन हुनसक्छ । मोटोपना भएका मानिसको खास समस्या चिल्लोपना नै हो, त्यसैले उनीहरूको पित्तमा पनि पत्थरीको सम्भावना अरु मानिसको तुलनामा ज्यादा हुन्छ । वंशाणुगत कारणले पित्तका रोग देखिन सक्छन् ।